အကြိုက်ဆုံးပုံကိုရွေးလိုက်ပါ သင့်ရဲ့ တကယ့်အတွင်းစိတ်ကိုပြောပြပေးလိမ့်မယ် – Trend.com.mm
အကြိုက်ဆုံးပုံကိုရွေးလိုက်ပါ သင့်ရဲ့ တကယ့်အတွင်းစိတ်ကိုပြောပြပေးလိမ့်မယ်
Posted on January 3, 2019 by Noel
တကယ်ပဲ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးပုံက ကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဖော်ပြပေးနိုင်ရဲ့လား?ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး
လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေရှိကြတဲ့အတွက် အကြိုက်ဆုံးပုံတစ်ပုံရွေးလိုက်ရုံနဲ့ အဲ့ဒီလူက ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်၊သူ့ရဲ့ တကယ့်အတွင်းစိတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ တပ်အပ်ပြောဖို့ကတော့ ခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် တူညီတာများနိုင်ပါတယ်။ကဲ အကြိုက်ဆုံးပုံရွေးပြီးပြီလား..?
သင်က နံပါတ် ၁ ပုံကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင်ရော သင့်အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုပါ တန်ဖိုးထားတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။အကူအညီတောင်းရင် ပေးဖို့ ၀န်မလေးတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့က သင်က အားနာလွယ်တယ်။ကူညီပေးလွယ်လိုက်တာ၊စိတ်ပျော့လိုက်တာလို့ထင်နေပေမဲ့ သူတို့အထင်က မှားယွင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ ကူညီဖေးမမှုတွေကြောင့် သင့်ကိုလည်းတကယ်တန်ဖိုးထားချစ်ခင်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ပါပဲ။တစ်ခြားသူတွေက သင်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းကို တန်ဖိုးထားတာကြောင့် သင်ဟာလူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား?
နံပါတ် ၂ ပုံကို အကြိုက်ဆုံးဆိုရင်တော့ သင်က မှန်လိုကျင့်ကြံသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သင်ပေးလိုက်သလို၊သင်တန်ဖိုးထားသလို တစ်ခြားသူတွေကလည်း သင့်ကိုပြန်ပေးစေချင်တယ်။ပြန်တန်ဖိုးထားစေချင်တယ်။တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ
မပြည့်စုံမှုတွေကို မြင်နေတွေ့နေရတာက သင့်စိတ်ကို အဆင်မပြေဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့် သင်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်မနေပဲ အချိန်တော်တော်များများမှာ အထီးကျန်ဆန်နေရသလို ခံစားနေရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သင်က မြန်မြန်ဆန်ဆန်သင်ယူလေ့လာနိုင်ပြီး တစ်ခြားသူတွေထက်ပိုတော်နေတဲ့ အားသာချက်တစ်ခုတော့ရှိနေပါတယ်။
နံပါတ်သုံးကို ရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီး အမှီအခိုကင်းကင်းနေတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခြားသူတွေဘာပြောပြော သင့်အိပ်မက်နောက်ကိုပဲ တစိုက်မတ်မတ်လိုက်နေတတ်သူပါ။ကျရှုံးမှုဆိုတာကို မလိုချင်ပဲ ကျရှုံးခဲ့ရင်တောင် ခပ်မြန်မြန်ပဲ ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြန်ဖြည့်ဆည်းတတ်တယ်။တစ်ခြားသူတွေက သင့်ကိုသွေးအေးပြီး တစ်ယောက်တည်းနေတတ်သူလို့ ထင်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းရင်းနှီးသွားတဲ့အခါမှသာ သင်က ပွင့်လင်းဖော်ရွေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်လေးကို သင်ကအကြိုက်ဆုံးဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အာရုံစုးစိုက်မှုကောင်းတယ်။ဥာဏ်ရ
ွှင်တယ်။အလွယ်တကူအလိမ်ခံရမယ့်လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြနေပါတယ်။သင့်မှာ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်တဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိနေပြီး ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အရည်အချင်းပြည့်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သင့်အနေနဲ့ အမြဲမှတ်ထားသင့်တာက လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံအရည်အချင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါက သင့်ဘ၀ကိုပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံး နံပါတ် ၅ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းပြီး အနုပညာဘက်ကိုအားသန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကူးယဉ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး အထိခိုက်မခံတဲ့နှလုံးသားကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို တစ်ခြားသူတွေကို ချပြဖို့တွန့်နေတတ်ပါတယ်။ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်က အောင်မြင်ပါ့မလား၊အသိအမှတ်ပြုခံရပါ့မလားဆိုတဲ့သံသယစိတ်၊တွေဝေစိတ်တွေဖြစ်နေလို့ပါ။သင်လုပ်ရမှာက ကျရှုံးမှာကိုကြောကတဲ့စိတ်ဖယ်လိုက်ပါ။သင့်ရဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းတွေကို တစ်ခြားသူတွေမြင်အောင် မျှဝေလိုက်ပါ။
တကယ်ပဲ တူညီရဲ့လား ဖြေပေးခဲ့ဦးနော် 😉
တကယျပဲ ကိုယျအကွိုကျဆုံးပုံက ကိုယျ့ရဲ့ အတှငျးစိတျကို ဖျောပွပေးနိုငျရဲ့လား?ဆကျဖတျကွညျ့လိုကျပါဦး
လူအမြိုးမြိုးစိတျအထှထှေရှေိကွတဲ့အတှကျ အကွိုကျဆုံးပုံတဈပုံရှေးလိုကျရုံနဲ့ အဲ့ဒီလူက ဘယျလိုလူမြိုးဖွဈတယျ၊သူ့ရဲ့ တကယျ့အတှငျးစိတျက ဘယျလိုဆိုတာ တပျအပျပွောဖို့ကတော့ ခကျပါတယျ။ဒါပမေဲ့လညျး အနီးစပျဆုံးခနျ့မှနျးဖျောပွထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ တူညီတာမြားနိုငျပါတယျ။ကဲ အကွိုကျဆုံးပုံရှေးပွီးပွီလား..?
သငျက နံပါတျ ၁ ပုံကိုရှေးခဲ့တယျဆိုရငျ သငျဟာ သငျ့ကိုယျသငျရော သငျ့အနားမှာရှိနတေဲ့သူတှကေိုပါ တနျဖိုးထားတတျသူတဈယောကျပါ။အကူအညီတောငျးရငျ ပေးဖို့ ဝနျမလေးတတျသူလညျးဖွဈပါတယျ။တဈခြို့က သငျက အားနာလှယျတယျ။ကူညီပေးလှယျလိုကျတာ၊စိတျပြော့လိုကျတာလို့ထငျနပေမေဲ့ သူတို့အထငျက မှားယှငျးပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သငျ့ရဲ့ ကူညီဖေးမမှုတှကွေောငျ့ သငျ့ကိုလညျးတကယျတနျဖိုးထားခဈြခငျပေးတဲ့သူငယျခငျြးအစဈအမှနျတှကေိုပိုငျဆိုငျခဲ့ရလို့ပါပဲ။တဈခွားသူတှကေ သငျနဲ့ရှိနတေဲ့အခြိနျတိုငျးကို တနျဖိုးထားတာကွောငျ့ သငျဟာလူခဈြလူခငျပေါမြားတဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ဟုတျရဲ့လား?
နံပါတျ ၂ ပုံကို အကွိုကျဆုံးဆိုရငျတော့ သငျက မှနျလိုကငျြ့ကွံသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။သငျပေးလိုကျသလို၊သငျတနျဖိုးထားသလို တဈခွားသူတှကေလညျး သငျ့ကိုပွနျပေးစခေငျြတယျ။ပွနျတနျဖိုးထားစခေငျြတယျ။တဈခါတဈလေ ကိုယျ့ရဲ့ လိုအပျခကျြတှေ၊ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှရေဲ့ လိုအပျခကျြတှေ
မပွညျ့စုံမှုတှကေို မွငျနတှေနေ့ရေတာက သငျ့စိတျကို အဆငျမပွဖွေဈစတေယျ။ဒါကွောငျ့ သငျက သူငယျခငျြးတှနေဲ့တဈသားတညျးဖွဈမနပေဲ အခြိနျတျောတျောမြားမြားမှာ အထီးကနျြဆနျနရေသလို ခံစားနရေတတျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ သငျက မွနျမွနျဆနျဆနျသငျယူလလေ့ာနိုငျပွီး တဈခွားသူတှထေကျပိုတျောနတေဲ့ အားသာခကျြတဈခုတော့ရှိနပေါတယျ။
နံပါတျသုံးကို ရှေးခယျြထားတယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျပွီး အမှီအခိုကငျးကငျးနတေတျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။တဈခွားသူတှဘောပွောပွော သငျ့အိပျမကျနောကျကိုပဲ တစိုကျမတျမတျလိုကျနတေတျသူပါ။ကရြှုံးမှုဆိုတာကို မလိုခငျြပဲ ကရြှုံးခဲ့ရငျတောငျ ခပျမွနျမွနျပဲ ပွီးပွညျ့စုံအောငျပွနျဖွညျ့ဆညျးတတျတယျ။တဈခွားသူတှကေ သငျ့ကိုသှေးအေးပွီး တဈယောကျတညျးနတေတျသူလို့ ထငျပမေဲ့ တကယျတမျးရငျးနှီးသှားတဲ့အခါမှသာ သငျက ပှငျ့လငျးဖျောရှတေယျဆိုတာ သိနိုငျတဲ့ပုံစံမြိုးဖွဈပါတယျ။
နံပါတျလေးကို သငျကအကွိုကျဆုံးဆိုရငျတော့ သငျဟာ အာရုံစုးစိုကျမှုကောငျးတယျ။ဉာဏျရ
ှငျတယျ။အလှယျတကူအလိမျခံရမယျ့လူစားမြိုးမဟုတျဘူးလို့ဖျောပွနပေါတယျ။သငျ့မှာ မယုံနိုငျစရာကောငျးလောကျတဲ့ကွံ့ခိုငျတဲ့စိတျဓာတျမြိုးရှိနပွေီး ခေါငျးဆောငျတဈယောကျဖွဈဖို့ အရညျအခငျြးပွညျ့နသေူလညျးဖွဈပါတယျ။သငျ့အနနေဲ့ အမွဲမှတျထားသငျ့တာက လူတိုငျးမှာ မတူညီတဲ့ကိုယျပိုငျပုံစံအရညျအခငျြးတှရှေိနတေယျဆိုတာပါပဲ။ဒါက သငျ့ဘဝကိုပိုပွီးအဓိပ်ပာယျရှိပြျောရှငျစပေါလိမျ့မယျ။
နောကျဆုံး နံပါတျ ၅ကိုရှေးခယျြထားတယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ ဖနျတီးနိုငျစှမျးကောငျးပွီး အနုပညာဘကျကိုအားသနျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။စိတျကူးယဉျနိုငျစှမျးမွငျ့မားပွီး အထိခိုကျမခံတဲ့နှလုံးသားကိုလညျးပိုငျဆိုငျထားပါသေးတယျ။ဒါပမေဲ့ သငျဟာ သငျ့ရဲ့ အရညျအခငျြးတှကေို တဈခွားသူတှကေို ခပြွဖို့တှနျ့နတေတျပါတယျ။ကိုယျလုပျလိုကျတဲ့အလုပျက အောငျမွငျပါ့မလား၊အသိအမှတျပွုခံရပါ့မလားဆိုတဲ့သံသယစိတျ၊တှဝေစေိတျတှဖွေဈနလေို့ပါ။သငျလုပျရမှာက ကရြှုံးမှာကိုကွောကတဲ့စိတျဖယျလိုကျပါ။သငျ့ရဲ့ အနုပညာအရညျအခငျြးတှကေို တဈခွားသူတှမွေငျအောငျ မြှဝလေိုကျပါ။
တကယျပဲ တူညီရဲ့လား ဖွပေေးခဲ့ဦးနျော 😉
ကလေးကောင်းကောင်းမအိပ်လို့ အလုပ်ပျက်၊အိပ်ရေးပျက်နေရတဲ့ မိဘတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
Netflix ရဲ့ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ Kingdom ရုပ်ရှင်စောင့်မျှော်နေသူများအတွက် trailer ဗီဒီယို